दुखद समाचार! ठुलो शोक : चर्चित संगीतकर्मी ४२ वर्षे वाजिदको कोरोनाले लियो ज्यान – Sandesh Munch
दुखद समाचार! ठुलो शोक : चर्चित संगीतकर्मी ४२ वर्षे वाजिदको कोरोनाले लियो ज्यान
June 1, 2020 588
बलिउडका चर्चित संगीतकर्मी वाजिद खानको आइतबार अबेर राती निधन भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उनको कोरोनाभाइरसका कारण ४२ वर्षको उमेरमा निधन भएको पुष्टि गरेको छ ।
उनले लेखेका छन्, ‘चर्चित गायक सोनु निगमले चर्चित संगीतकर्मी वाजिद खानको केही बेर अघि निधन भएको जानकारी मलाई दिए । उनी कोभिड–१९ द्वारा संक्रमित थिए ।’
यस्तै, वाजिदका वाल्यकालका साथी रणवीर शौरीले लेखे, ‘मेरो वाल्यकालका साथीको यस्तो खबर सुनेर दुःखी छु । वाजिदले कोभिड–१९ सामू घुँडा टेको । म शोकमा छु । वाजिद, मेरो भाइ तिमी र तिम्रा परिवारका लागि अँगालोभरीको माया पठाइरहेको छु । यो अत्यधिक दुःखद हो ।’
यस्तै वाजिदका नजिकका साथी गायक सलिम मर्चेन्टले उनलाई याद गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखे, ‘साजिद वाजिदमार्फत् चर्चित वाजिद खानको निधनको खबर सुनेर म उजाडिएको महसुस गरिरहेको छु । अल्लाहले उनको परिवारलाई शक्ति दिउन् । सेफ ट्राभल वाजिद खान । तिमी निकै छिट्टै गयौ । म शोकमा छु र टुटेको छु । ’
यस्तै, प्रियंका चोपडाले पनि उनको मृत्युमा ट्वीटरमा टिप्पणी गरेकी छिन्, ‘निकै भयानक समाचार । म सधैं साजिद भाइको एउटा कुरा याद गरिरहनेछु, उनको हाँसो । सधैं हाँसिरहने । निकै छिट्टै बिदा भए । उनको परिवार र शोकमा भएका सबैप्रति मेरो समवेदना ।’
Prevआजबाट अन्ध्रशुक्र शुरु, यी ६ राशिले अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु होला!
Nextदुखद समाचार !कोरोनाबाट बच्न भन्दै भारतबाट गाउँ आइपुगे चन्द्रबहादुर, तर घरको बलेसी नै नकटी प्राण त्यागे
अमेरिकन युवती मिसेल अलेक्जेन्ड्रालाइ ७ दिन भित्र नेपाल छोड्न आदेश,नेपालमा बसेर यस्तो डरलाग्दो धन्दा गरिन। भिडियो हेर्नुहोस ।